WARBIXIN: Maxaad kala socotaa waxa uu salka ku hayo Khilaafka Pakistaan iyo Hindiya?!. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Feb 28, 2019 865 0
Wadamada Pakistaan iyo Hindiya,waa dalal deris ah, oo in muda ah ay dhexmarayeen dagaallo toos ah iyo kuwa dadbadan oo salka ku haya gobolka istiraatiijiga ah ee Kashmiir.
Gobolkan oo ay leeyihiin dadka muslimiinta, aqalabiyadiisana iyagu degaan ayaa ku yaala mandiqad istiraatiji ah oo dhacda inta u dhexeysa bartamaha iyo koonfurta qaaradda Asia, wuxuuna xuduud la leeyahay illaa ugu yaraan afar dal.
Dalalkaas uu xuduuda la leeyahay waxaa kamid ah ah Turkistaanta bari oo ay Shiinuhu gumeysi ku heystaan, Hindiya, Pakisaan iyo Afqaanistaan, waxaana masaaaxada gobolka Kashmiir lagu sheegaa iney gaareysa 86,023 KM2.
Heshiis loogu magacdaray Shimla oo sanadkii 1972-dii dhexmaray dowladaha Pakistaan iyo Hindiya ayaa gobolka Kashmiir waxaa loogu qeybiyay labo qeybood, iyadoona qeybta ugu badan oo masaaxadeedu gaareyso 53,665km2 la siiyay Hindiya, waxaana loogu magacdaray Jamwo Kashmiir.
Dowladda Pakistaan ayaa la siiyay qeyb yar oo kamid ah gobolka Kashmiir, oo masaaxo ahaan gaaraysa 32,358km2, waxaana loogu magacdaray wilaayada Kashmiir ee xurta ah (Azad Kashmiir).
Khilaafka u dhexeeya Pakistaan iyo Hindiya, wuxuu soo billowday tan iyo markii gumeystuhu kala qeybiyay wadamada dhaca qaarad u ekahaa Hindiya, lana aas-aasay dowladda Pakistaan sanadkii 1947-dii.
Heshiiska kala qeybinta qaarad u ekaha Hindiya, wuxuu gumeystuhu ku go’aamiyay in gobollada ay aqlabiyadooda degaan muslimiinta la raacsiiyo Pakistaan, halka kuwa soo harana la hoos geeyo dowladda Hindiya.
Balse inkastoo gobolka Kashmiir uu yahay gobol ay degaan muslimiinta, islamarkaana doonayeen iney ku biiraan dalka Pakistaan, ayaa muhiimadda istiraatiijiyaded ee uu leeyahay dartiis wuxuu gumeystuhu diiday in si toos ah loo raaciyo Pakistaan.
Reer Kashmiir oo gubaya calanka Hindiya.
Dowladaha Hindiya iyo Pakistaan ayaa ku sigtay iney galaan dagaallo waaweyn, illaa ugu dambeyn uu soo fargeliyay golaha isku magacaabay amaanka, kaas oo sheegay in la qaado afti ay reer Kashmiir ku raacayaan dalka ay doonaan, welina lama dhaqan gelin arintan.
Labada dowladood waxaa dhexmaray saddex dagaal oo waaweyn, tan iyo intii uu soo kala dhexgalay muranka ku salleysan gobolka Kashmiir, labo kamid ah dagaalladaas Pakistaan iyo Hindiya ayaa si toos ah isku farasaaray, waxaana ay dheceen sanadihii 1948-dii iyo 1965-tii.
1971-dii ayuu dagaalka sadexaad dhexmaray Pakistaan iyo Hindiya, balse dagaalkan ma ahayn mid toos ah, sababtoo ah Hindiya waxay taageereysay dowladda Bangaladesh oo dooneysay iney ka go’do Pakistaan.
Askari katirsan ciidamada Hindiya oo ku sugan xuduud beenaadka.
1999-kii, dowladaha Hindiya iyo Pakistaan waxay markale ku sigteen inuu dhexmaro dagaallo toos ah, balse 2002-dii ayay gaareen heshiis nabadeed, iyo inaan la jebin heshiiskii xabad joojinta ee Kashmiir loogu kala qeybiyay Pakistaan iyo Hindiya.
Sanadkii 2008-dii, xiriirka Pakistaan iyo Hindiya ayaa aad u xumaaday, kadib qaraxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Mombaay, kaas oo ay ku dhinteen 150 ruux.
Hindiya ayaa ku eedeysay Pakistaan iney ka dambeyso weeraradan, waana arinta ay sida adag u beenisay dowladda Pakistaan.
Marka laga hadlo awooda militeri ee labada dal, waa wadamo ku dadaala iney is hormariyaan, taas oo muujineysa heeganka ay ugu jiraan dagaallo hor leh.
Miizaaniyada melleteriga ku bixisay Pakistaan 2018-ka waxay gaartay lacag dhan 11 Bilyan oo dollar taas oo u dhiganta %3.6 dakhiliga guud ee dowladda Pakistan soo gala, waxaana ciidamada Pakistaan u diiwaangashan ay gaarayaan ugu badnaan 800 oo kun oo askari.
Pakistan waxay heysataa 140 illaa 150 madaxyada hubka Niyugleerka, waxay sidoo kale heysataa sawaariikh casri oo uu kamidyahay saaruukha Shaahiin2, kaas oo wax ka dila illaa 2000 oo Km.
Marka laga hadlo diyaaradaha oo kamid ah waxyaabaha lagu qiimeeyo awooda milliteri ee dowladaha, Pakistan waxay heysataa 425 diyaaradood oo badankood casri ah waxaana ugu muhiimsan diyaaradaha AF7GB oo dowladda Shiinaha Farsameyso iyo diyaaradaha F16 ee Mareykanku farsameyo.
Dowladan waxay sidoo kale leedahay hub nuclear , oo garaaci karo meela fog fog, waana madaxyo Niyigleer Taaktiiki ah oo guur guura.
Dhinaca dowladda Hindiya, 50 Bilyan oo dollarka Mareykanka ah ayay ku bixisay miizaaniyadda ciidamada sanadkii 2008-da, taas oo ka dhigan %2.1 qarashka guud ee soo gala dowladda. Noocyada kala duwan ee ciidamada Hindiya waxay tiro ahaan gaarayaan 1.4 Milyan oo askari.
Ciidamo katirsan Hindiya oo ku sugan gobolka Kashmiir ee gumeysiga ku jira.
Waxay sidoo kale leedahay dowladan Hub nuclear ah, diyaaradaha ay adeegstana waa kuwa duugoobay, waxaana badankood soo saaray Ruushka, balse hadda waxaa socda olole ballaaran oo reer Yurub iyo Maraykanku ku doonayaan in lagu xoojiyo awooda milliteri ee dowaladan, taas oo ka dhigan awooda ugu weyn ee reer galbeedku ku leeyihiin qaaradda Asia, gaar ahaan meel u dhow Afqaanistaan.
Haddii aan usoo laabano dhulka Kashmiir, waa dhul leh taariikh fog marka laga hadlo islaamka, waxaana uu kamid ahaa dhulalkii uu islaamku gaaray xilliyo fog, gaar ahaan waqtiyadii ay socdeen futuuxaadkii bilaadu-sindi ee uu hor kacayay hogaamiyihii ka tirsana dowladdii Umawiyiinta ee Muxamad binul Qaasim Ath-thaqafi.
Inkastoo dhulka Kashmiir aanu xilligaas islaamku gaarin, sababo la xiriira isagoo ku yaala dhul buuraley ah oo ay adagtahay in la jiiro, hadana waxaa sharafka inuu halkaas islaamku gaaro lahaa suldaan Maxmuud Al-Qaznawi oo geeriyooday sanadkii 422-dii hijriyada.
Xilligan la joogo muslimiinta Kashmmiir waxay kamid yihiin 90-ka milyan ee muslimiinta ah, xoogna ay ku heysato dowladda hindiya, lana kulmaya dhibaatooyin ay adagtahay in lasuureysto, waxaana reer Kashmiir ay jecelyihin dal ahaan iney ku biiraan wadanka muslimka ah ee Pakistaan, taasna waxaa ka hortaagan dowladda Hindiya oo taageereo ka heleysa Maraykanka.
Muslimiinta Kashmiir waxay la kulmayaan gumeysi adag oo uga imaanaya Hindiya.
Hadda, waxaa jira jamaacaad islaami ah oo u halgamaya sidii uu gobolkaas uga xuroobi lahaa gacanta gumeysiga Hindiya, waxaana jamacaadkaas kamid ah faraca Alqaacida ee qaarad u ekaha Hindiya, iyo jamaacada Jeyshu Muxamed oo sheegatay masuuliyadda weerar 14-kii bishan feberuary Kashmiir lagula eegtay ciidamo katirsan Hindiya, laguna dilay ugu yaraan 46 askari oo ay saraakiil ku jiraan.
Weerarkas ayaa dhaliyay xiisadda hada ka dhex aloosan dowladaha Pakistaan iyo Hindiya, waxaana Hindiya ay ku eedeysay Pakistaan in iyadu ka dambeyso weerarkan, sidaas darteed ayay dhawaan duqeymo xoogan ka fulisay gudaha Pakistaan.
Pakistaan oo ka jawaabeysa duqeymahaas ayaa dhulka soo dhigtay labo diyaaradood oo ay leedahay Hindiya, halka ay gacanta ku dhigtay duuliyayaashii diyaaradahaas.
Halkan ka dhagayso Warbixin soo gudbineysa Loolanadii ugu muuqday ee dhexmara dalalka Pakistaan iyo Hindiya.